Malunga nathi -Xiaoxian Ruiyi Commerce Trade Co., Ltd.
Sijolise kubathengi, sivelisela izinto ezintsha kwaye sixhaswa lixabiso lokuthengisa kunye nomrhwebi weRawware ezenziwe e-China.
Sasimele i-China Mill njenge-Baosteel, i-Ansteel kunye nenkampani yabucala ethengisa i-coil / i-SPCC ebandayo, i-coil sheet sheet / i-SGCC, i-coil yesinyithi yentsimbi / i-Aluzinc coil yentsimbi, I-coil yentsimbi esele yenziwe kwangaphambili / i-PPGI, ingqele eqengqelekileyo Isinyithi esisezantsi sentsimbi / i-CRNGO, kunye neekhoyili zephepha lealuminium.
Asithengisi kuphela izinto zentsimbi kodwa sikwabonelela ngenkonzo yokufumana izinto ngokwesiko evela e-China
URuiYi ngumboneleli oqeqeshiweyo kunye nomenzi weplastikhi yealuminium e-China kwaye sikwasebenzisana nomzi mveliso odumileyo wealuminium uzama ukusindisa abathengi bethu kwiinkalo ezahlukeneyo. Umzi-mveliso wethu wasekwa ngo-1997, ngoku inkampani inabasebenzi abangaphezu kwama-4000, kubandakanya nabangaphezulu kwama-300 abasebenzi abaqeqeshiweyo.
Rhweba ngaphandle pc
Uhlobo lo shishino
Umenzi, uMmeli, uMthumeli ngaphandle, iNkampani yokuThengisa, uMthengisi
Intshona Melika, Umzantsi Melika, iNtshona Yurophu, iMpuma Yurophu, iMpuma yeAsia, mpuma Asia, Mpuma Mpuma, Afrika, Oceania, kwihlabathi liphela
Eyona nto ilungileyo Isisombululo se-One-Stop ku-Aluminium yokuNikezelwa kwensimbi e-China.
Sizimisele ukubonelela ngeemveliso zeAluminiyam ezikumgangatho wehlabathi. Akukho nto ibaluleke ngakumbi kuthi ukoneliseka ngokupheleleyo yinkonzo yethu kunye nemveliso enomgangatho obalaseleyo, ukukhula okuqhubekayo, amathuba, kunye nolwalamano oluluncedo.
I-Xiaoxian RuiYi yoRhwebo loRhwebo lweeNkampani. Saqala njengomsebenzi omncinci, kodwa ngoku siye saba ngomnye wabathengisi abakhokelayo kwishishini lealuminium e China.
Khetha uncedo lwethu oluphambili olukhulu
Xiaoxian Ruiyi Commerce Trade Co., Ltd.
Uluhlu olukhulu lokuqinisekisa umgangatho
Ukusuka kwi-odolo ebekwe kuthumelo oluphumayo, uhlolo olusemgangathweni ezintathu lwenziwa ukuqinisekisa ukuba inqanaba elifanelekileyo lemveliso egqityiweyo ingaphezulu kwe-100%. Sine-inventri enkulu, kwaye sinokunika abathengi ubonelelo olwaneleyo ukuze abathengi bangakhathazeki malunga nengxaki yokuphela kwesitokhwe kunye nokunqongophala kwesitokhwe.
Ukuhanjiswa kwangexesha kunye nokonga iindleko
Sithembisa ukuba emva kokuba umthengi ebeka iodolo, iimveliso zebala ziya kuthunyelwa kwangolo suku lunye. Xiaoxian Ruiyi Commerce Trade Co., Ltd. ngokunyanisekileyo inika iimveliso ezikumgangatho ophezulu kubathengi basekhaya nabangaphandle, kwaye inikezela abathengi ngeemveliso ezonelisayo.
Amava enkonzo afakiwe
Siyathembisa ukuba inkampani yethu iyakulandelela yonke i-odolo kwangexesha ukuqinisekisa ukuba abathengi banokuzifumana iimpahla ngokukhuselekileyo, bamamele izimvo zabo neengcebiso ngokuqhubekayo, kwaye babonakalise ezethu iingxaki. Vumela abathengi bazive bekhululekile.
IAluminiyam Alloys igcina umgangatho ophezulu wemveliso kuyo yonke inkqubo yokuvelisa. Ukusuka kunikezelo lwe-ingot kunye nesanti ukuya kwitsheki yokugqibela, kuthathelwa ingqalelo yonke imveliso njengoko ichaziwe kwinkqubo yolawulo lweemakhishithi kwimfuno nganye yokuphosa.
Amancedo asemgangathweni abandakanya ukubonwa ngobuninzi kuhlalutyo lwesinyithi, i-SPC yolawulo lwentlabathi, ukuvavanywa komzimba, ukungena kwedayi, i-x-reyi, ukuvavanywa koxinzelelo kunye nokutshekishwa kwinqanaba le-elektroniki. Inkqubo yokugcina irekhodi ebanzi idibanisa idatha yokulandeleka ngokupheleleyo. Imeko yenkqubo yokulawulwa kwemveliso yobuchwephesha kwikhompyuter ibonelela ngohlaziyo lobume bemveliso yemihla ngemihla luvumela ukuhambelana nokuhanjiswa kwexesha.
I-Aluminium Alloys iyaqhubeka nokuzinikela kwayo kumgangatho ngenkqubo eqhubekayo yesibonelelo kunye nenkqubo yokuphucula ukuhlangabezana neemfuno zabathengi zexesha elizayo, ngakumbi kwizicelo ezinzima.
Yonke into ofuna ukuyazi ngathi